Sheekh Cabdul-Xaq oo Kitaabka Alle Dadka ku Daweeya gudaha Bosaaso – Radio Daljir
Janaayo 17, 2016 10:01 b 0
Axad,Janaayo,17-(Daljir)-Sheekh Cabdul Xaq Xassan Macalin oo ka mid ah Culumada Soomaaliyeed ayaa dad badan ku Daweeyay Qur’aan magalaada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari,waxaana xaruntiisa ku xiran dad badan oo isugu jira Rag iyo Dumar.
Marka aad booqato xarunta ayaa waxaa indhahaagu ay qabanayaan dad badan oo Safaf ugu jira xarunta oo ku taala naxaajiga Mas’jidu Raxma ee magaalaada Boosaaso.
‘’Walaalayaal muddo dhan Todobo sano ayaan dadkeena Soomaaliyeed aan ku Dawaynayay Qur’aanka ILLAAHAY,mudada aan ka shaqaynayay hawshan uu ILLAAHAY ii diray waxaan uu EEBE ku caafiyay dad aad u badan,kuwaas oo qaarkood ay xattaa dhakaatiirtu wax ka qaban waayeen oo barele lagu waday’’Ayuu yiri Sheekh Cabdul-Xaq Xassan Macalin.
Wuxuu intaas ku daray’’Xaruntan uma annaan furan dhaqaale EEBE dartii ayaan dadka ugu adeegaa,qofka noo yimaadan waxaan ka qaadnaa $5 oo kaliya oo aan ku bixino Waardiyaha meesha,Kirada iyo dadka shaqaynaya,qofkii aan haysan wax lacag ah kama qaadno,annaga ayaa markii aan Qur’aanka saarno Gaariga ka bixina’’.
Sheekh Cabdul-Xaq ayaa sheegay in Ummadda Muslimiinta ah ay Raxmad iyo hannuun ugu filan yahay Qur’aanka ILLAAHAY ee Qawlka EEBE.
‘’Waxaan Qur’aan saarnay oo caafimaaday dad la Sixray,kuwo La Ilaystay iyo dad ay Jinno ka qaylinayeen,waxaa nalo keenay Gabar dibada laga keenay oo Indha la’ayd oo loo qoray Owkilaaye Garaadadiidu ay aad u badan yihiin si diciifana wax u arki jirtay markii aan saarnay Qur’aanka EEBE ILLAAHAY Amarkiis waa Caafimaaday’’Ayuu yiri Sheekh Cabdul-Xaq oo hadalkiisa sii wata.
Wuxuu intaas ku daray in sido kale dad loo keenay uu ka mid ahaa Wiil yar oo jirkiisa nabaro waawayn ay kaso baxeen oo dhakhaatiirtu ay ku sheegen Kansar,hasa yeeshe markii todobaad Qur’aan lagu akhriyay uu caafimaaday,waxa hayayna ay ahayd Il Bini’aadam oo kaliya.
‘’Walaalayaal muddo 7-sano ah ayaan shaqaynayay walina waxaa suuragal ah innaadan igu arag Saxaafadda,dadka ku xiran xaruntana maalinba maalinta ka dambaysa waa sii kordhayaan,maanta waxaan idiin hor imi innaan idiin ku bishaareeyo Dawo in Qur’aanku uu idiin ku filan yahay ee EEBE u noqda’’Ayuu yiri Sheekhu.
Ugu dambayntii Sheekh Cabdul-Xaq ayaa sheegay inuusan ka daalayn inuu EEBE dartii ugu Adeego Bulshada Soomaaliyeed.
Sheekh Cabdul-Xaq kala xiriir:-